Sarri oo kooxdiisa Chelsea ka dalbaday in marka uu Suuqa furmo loo keeno Weeraryahankan…. – Gool FM
Sarri oo kooxdiisa Chelsea ka dalbaday in marka uu Suuqa furmo loo keeno Weeraryahankan….
Byare October 14, 2018
(London) 14 Okt 2018. Tababare Maurizio Sarri ayaa kooxdiisa Chelsea u sheegay in weeraryahanka naadiga Genoa ee Krzysztof Piatek uu yahay bartilmaameedkiisa koowaad ee suuqa marka uu dib u furmo bisha Janaayo.
Piatek oo suuqii xagaaga uun soo cago dhigtay Genoa ayaa wacdaro waali ah ka dhigaya horyaalka Serie A kaddib markii uu 9-gool ku dhaliyay 7-kulan iyo waliba 13-gool guud ahaan tartamada Yurub.
Afar gool ayuu uga shubay naadiga Lecce kulan ka tirsanaa Coppa Italia, waxaana taa u dheer inuu gool dhaliyay kulan kasta oo ka tirsan horyaalka kal ciyaareedkan kulamadii ilaa iminka la soo ciyaaray.
Genoa ayaa ka fikireysa in weeraryahankeeda ay dul dhigto adduun dhan 60-milyan, warsidaha Express ayaana sheegaya in Sarri ay ka go’antahay sidii uu ku soo xero galin lahaa Krzysztof Piatek.
Tababaraha reer Talyaani ayaa doonaya inuu Cadaadiska dhanka gool dhalinta ka qaado Eden Hazard oo hogaaminaya iminka gool dhalinta Premier League maadaama ay qaab ciyaareed liita ku jiraan weeraryahanadiisa Alvaro Morata iyo Olivier Giroud.
Shaqada Joachim Low ee xulka Germany oo halis ku jirta iyo hal kulan oo loo qabtay